तरेलीको गतिविधि नयाँ पुस्ता केन्द्रित छ: अध्यक्ष श्रेष्ठ
विशुद्ध रुपमा विद्यार्थी केन्द्रित भएका होइनौ । तर, नयाँ पुस्तालाई समेट्नु हाम्रो ध्येय हो ।
भलाकुसारी | Published on 2016-12-25 |
म दुखेँ समस्या चर्को देखेर
आमाको फाटेको बर्को देखेर
प्रस्तुत अंश प्रकाश बस्नेत 'गफाडी'ले तरेली साहित्य प्रतिष्ठानको मासिक श्रृङ्खलामा वाचन गरेको गजलको मतला हो । तरेलीको मासिक श्रृङ्खला अन्तर्गत पुस महिनाको कार्यक्रम शनिबार राजधानीको थलीस्थित प्रज्ञासदन माविमा सम्पन्न भएको छ । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगमा बसोबास गर्ने साहित्यकारहरुले स्थापना गरेको यस संस्थाले विगत दुईवर्षदेखि नियमित साहित्यिक गतिविधिहरु गर्दै आइरहेको छ ।
कार्यक्रममा मानन्धर अभागी, प्रशन्न घिमिरे, प्रकाश थापा, महेशकुमार वाग्ले, राजदास श्रेष्ठ, कुमार अधिकारी, साबु पोखरेल, सुनाखरी, अग्रणी अधिकारी, रमेश 'पुजारी', प्रकाश रम्घाली, ईश्वर श्रेष्ठ, दीपक नेपाल लगायत तीन दर्जन बढी श्रष्टाले रचना वाचन गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रस्तुत रचनामध्ये ७ जनालाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गरिएको थियो ।
तरेली साहित्य प्रतिष्ठान साहित्यकार शैलेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सक्रिय छ । शैलेन्द्र श्रेष्ठ कविता, व्यङ्ग्यलेखन र प्रहसनमा परिचित नाम हो । उनका नेवारी भाषामा तीनवटा र नेपालीमा एक गरी चार कृति प्रकाशित छन् । प्रस्तुत छ, प्रतिष्ठानका गतिविधिमा केन्द्रित रही प्रतिष्ठानका अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी:
तरेली साहित्य प्रतिष्ठानले अचेल केके गर्दैछ ?
काठमाडौंको उत्तरपूर्वी भेगमा शुन्यप्राय: भएको साहित्यिक गतिविधिलाई बढाउने कार्यमा हामी लागिरहेका छौं । दुई वर्षदेखि मासिक साहित्यिक श्रङ्खला कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
विद्यालयमा साहित्यिक कार्यक्रम गर्नुको उदेश्य के हो ?
हामी यस भेगमा विद्यालयसँग सहकार्य गर्दै साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । यसले प्रतिभा उजागर गर्ने हाम्रो उदेश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नुका साथै विद्यार्थी भाइबहिनीलाई साहित्यमा लाग्न प्रेरित गर्दछ ।
यसको मतलब तपाईंहरु विद्यार्थी केन्द्रित हुनुहुन्छ ? अभियानकै रुपमा लाग्नुभएको हो ?
हामीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा नयाँ पुस्ताका भाइबहिनीको सहभागिता बढाउँदै लगिरहेका छौं । अग्रज र मूलधारका साहित्यकारसँग नयाँ पुस्ताले अन्तरक्रिया गर्ने अवसर सिर्जना गर्दै हामी अघि बढिरहेका हौं । हामी विशुद्ध रुपमा विद्यार्थी केन्द्रित भएका होइनौ । तर, नयाँ पुस्तालाई समेट्नु हाम्रो ध्येय हो ।
तरेलीको कार्यक्षेत्र र मुख्य गतिविधि केके हुन् ?
तरेली साहित्य प्रतिष्ठान विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आइ यस भेगमा बसोबास गर्ने साहित्यकारको सक्रियतामा स्थापना भएको संस्था हो । मुख्यत: हामी यही क्षेत्रमा साहित्यिक कार्यक्रम गरिरहेका छौं । विभिन्न संस्थाहरुसँग हाम्रो सहकार्य छ । मासिक कार्यक्रम श्रृङ्खला चलिरहेको छ । ऐतिहासिक दिवस, पर्वहरुमा विशेष कार्यक्रम गर्दै अघि बढिरहेका छौं । संस्थाको आफ्नै नियमित साहित्यिक प्रकाशन सुरु गर्ने योजनामा छौं ।
हिजोआज संस्थागत कार्यक्रमबाहेक केके गर्दै हुनुहुन्छ ?
अचेल मुलत: गजल लेखनमा लागिरहेको छु । कविता र व्यङ्ग्यलेखन गरिरहेको छु । फुटकर लेखरचनाहरु आइरहेका छन् ।